In ka badan 32 Ruux oo ku dhintay Qarax ka dhacay dalka Nigeria, – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaIn ka badan 32 Ruux oo ku dhintay Qarax ka dhacay dalka Nigeria,
Ugu yaraan 32 ruux ayaa ku dhimatay 80 kalana waa ayku dhaawacmeen kadib markii qof waxyaalaha qarxa isku soo xirey uu isku qarxiyay suuq ku yaal magaalada Yola ee Waqoyi Bari dalka Nigeria.
Shaqaalaha gargaarka degdegga ah ayaa sheegay in meydadka dadkii ku dhintey iyo dadkii ku dhaawcmay loo daadgureeyay isbitaalada.
Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in qaraxa laga maqlay meelo fogfog, waxana qaraxan uu ka dhacay suuq lagu iibiyo khudaarta.
Waa markii saddexaad oo weerar is qarxin ah lala beegsado suuqa Yola halkaa oo kumanaan ruux oo ka soo barakacay deegaanada ay ku xoogan yihiin Boko Haram ay ku nool yihiin.
Inkabadan konton ruux ayaa ku dhintey labo qarax oo hore uga dhacay magaalada Yola.Dadka ku nool magaaladaas ayaa haatan waxaa soo wajahay cabsi xoog leh.
Dhinaca kale, Madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa amray in la soo xiro la taliyihii dhinaca ammaanka ee madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Sambo Dasuki iyadoo loo haysto xatooyada lacag gaareysa $2bn ($1.31).
Sambo Dasuki ayaa lagu eedeynayaa in uu is dabamariyay lacago lagu doonayay in lagu soo iibiyo 12 helicopter iyo afar diyaaradaha dagaalka ah iyo rasaastooda, hase yeeshee si adag ayuu u beeniyay eedeyntaas.
Qalabkan ayaa qorshuhu ahaa in lagula dagaalamo maleeshiyaadka kooxda Boko Haram. Ciidamada Nigeria ayaa hore uga qeylinayay qalab xumo hayso awgeed inay dagaal la geli karin xooggaga Boko Haram. Afhayeenka Mr Buhari ayaa sheegay in musuqmaasuqa uu sababay in kumanaan ruux ay u dhintaan dalka Nigeria.
Madaxweyne Buhari ayaa xafiiska la wareegay bishii May ee sanadkan kadib markii uu ka guuleystey madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Goodluck Jonathan.